आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका ८ ओटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा १७.७९ % वृद्धि, कुन कम्पनीको कति ?
फागुन १०, काठमाडौं । आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका नयाँ आठ ओटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा कुल १७ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेक सबै कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएको छ । गत आवको तुलनामा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा चालू आवमा १७ दशमलव ९१ प्रतिशतले कमी आएको हो ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कमाएको हो । कम्पनीले सो अवधिमा रू. १७ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको छ ।
यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म आठ ओटा कम्पनीले कुल रू. १६ अर्ब ६ करोड ६७ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
साथै, यी आठ ओटै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । आठ ओटा कम्पनीमध्ये ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अनुमति पाएको छ ।
कम्पनीले ६६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि रेटिङ गराएका छन् भने केही कम्पनीको बाँकी रहेको छ ।
सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ इक्रा नेपालमा रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले निष्कासन गर्ने आईपीओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आर बिबिबि रेटिङ दिएको हो । उक्त रेटिङले कम्पनीको आधारभूत अवस्था मध्यम रहेको देखाउँछ ।
साथै, दायित्व बहन गर्ने क्षमता औषत मध्यम जोखिम रहेको देखाउँछ । कम्पनीले ७५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । त्यसैगरी आइएमई लाइफ इन्स्यारेन्स, युनियन लाइफ र सन नेपाल लाइफले पनि आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि रेटिङ गराएका छन् ।
यी कम्पनीहरुले निष्कासन गर्ने आईपीओले ग्रेड ४ रेटिङ पाएका छन् । ग्रेड ४ रेटिङले कम्पनीको आधारभूत पक्ष औषतभन्दा तल रहेको देखाउँछ । सेबोनमा निवेदन दिन बाँकी सात ओटा कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सेबोनमा निवेदन दिएर स्वीकृति पाएपछि आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् ।
स्रोत : कम्पनीद्वारा प्रकाशित चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण
[Feb 22, 2021 02:55pm]
Ipo bechne belama yetiuti nafa vanxan bechi sakepaxi lavansa dinebelama nafa ghateko hunxa wa harauxan.ipo lutne aujar vayo.kasle herne ?